Shiinaha Dheecaanka xaraashka sare ee bamboo u adkaysta samaynta banaanka Soosaarka iyo Warshad | Bamboo Dahab ah
REBO® guddiga gogosha bamboo waxaa loo aqoonsan yahay cimri dhererka 1 (aad u adkeysi badan) una isticmaal Fasalka 4 (oo leh dhulka iyo / ama biyo macaan). Waxay leedahay astaamo la mid ah sida looxa adag. Adaggeeda brinell ayaa xitaa ka sarreeya qoryaha. Dhinacyada jeex jeexan waxay ka dhigayaan rakibaadda si aad u fudud, oo leh silsilado bir bir ah leh.
Bamboo waxay leedahay faa iidooyin iyo astaamo badan oo dhaqaale iyo bey'adeed. Bamboo waa dhir si dhakhso leh u koraysa adduunka. Waa mid saaxiibtinimo u leh deegaanka waxayna si weyn u yareyneysaa jarista qashin-qubka. REBO sabuuradda gogosha bamboo waxaa laga sameeyaa fiiloyin bamboo la tuujiyey oo lagu daaweeyaa heerkul sarreeya, karbayn qoto dheer iyo tikniyoolajiyad kulul oo kulul, taas oo ka dhigaysa guddiga mid aad u waara, toosan, adag oo adag. REBO bamboo decking waxaa lagu muujiyay dusha sare ee xajmiga (R10), oo ku habboon carruurta, xayawaanka, iyo kuwa kale.
REBO® sabuuradda gogosha ayaa aad u deggan ka dib daaweynta heerkulbeegga oo ay weheliso jajabinta bambooyinka. Daaweynta kuleylka gaarka ah iyo habka la cadaadiyo ayaa ka dhigaya guddiga astaamaha ugu sarreeya ee cimri dherer, oo aad ugu adkaysi badan cimilada kala duwan. Xitaa sannado badan ka dib, looxyada bambooyinku si toos ah ayey u taagan yihiin, iyagoo ka tagaya looxyada cawl dabiici ah, muuqaalka ayaa weli deggan. REBO® guddiga baasaboorka waxay aad ugu habboon yihiin codsiyada bannaanka, waxaana si ballaaran loogu adeegsadaa qurxinta, sagxadda banaanka, terrace, baranda, balakoonka, mashruuca degmada, iwm.
REBO® guddiga gogosha bamboo waxaa loo aqoonsan yahay cimri dhererka 1 (aad u adkeysi badan) una isticmaal Fasalka 4 (oo leh dhulka iyo / ama biyo macaan). Waxay leedahay astaamo la mid ah sida looxa adag. Adaggeeda brinell ayaa xitaa ka sarreeya qoryaha. Dhinacyada jeex jeexan waxay ka dhigayaan rakibaadda si aad u fudud, oo leh silsilado bir bir ah leh. Clips-yada waxaa lagu dhejiyaa jeexjeexyada dhinacyada oo waxaa lagu dhejiyaa joornaalada hoose, sidaas darteed looxyadu si joogto ah ayey u go'an yihiin. Qaabkan clips-yada waa kuwo aan la arki karin oo la arki karo waxayna muujinayaan muuqaal fiican. Dusha sare waa naqshad muuqaal ah oo mowjad weyn leh madaxuna wuxuu noqon karaa mid fidsan ama nidaamka T&G.
Hore: Midab madow oo aan lahayn sabuuradda bamboo qaloocsan
Xiga: Qalabka rakibida fudud ee gogosha bamboo gogosha dibedda ah
Baasaboorka Carbonized Decking
Bannaanka Decking Bannaanka
Baasaboorka adag ee Decking
Baasaboorka Shabaqa Bannaanka
Baakada alwaax Decking
Baakad alwaax Decking
Decking Bamboo Decking
Decking Baasaboor culus
Dib-u-habayn Decking Bamboo
Decking Bamboo Dhoobada